यी तस्बिरले बताउँछन् धोनीले किन लिए अप्रत्यासित निर्णय ?
मुम्बई । यस खेलाडीको दिमागमा के चलिरहेको हुन्छ ? उनी के फैसला लिने तयारी गर्दैछन् ? त्यो आममानिसले लगाउने अनुमानभन्दा फरक हुने गर्छ । उनले लिने निर्णय प्राय: अकस्मात हुने गरेका छन् । ती खेलाडी हुन् भारतीय क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धोनी ।
अष्ट्रेलियामा जारी टेस्ट सीरिजको क्रममा धोनीले अचानक टेस्ट कप्तानीबाट सन्यास लिएका थिए । धोनीका हरेक गतिविधि तथा निर्णयहरु अचम्मित पार्ने खालका हुन्छन् । यसपटक पनि धोनीले अचानक एकदिवसीय र टी-ट्वान्टी क्रिकेटको कप्तानीबाट पछि हटेर सबलाई अचम्ममा पारिदिएका छन् । सबैको मुखमा यो प्रश्न झुण्डिएको छ कि आखिर अचानक किन यस्तो निर्णय ?
यी तस्विरले बताउँछ कि धोनीले कप्तानी छोड्नुका कारण
धोनी केहि दिन अगाडिसम्म पनि मैदानमा देखिएका थिएनन् । तर पछिल्लो चार दिनको बिचमा रणजी ट्रफीको सेमिफाइनलमा म्याचमा नागपुरको बीसिए स्टेडियममा देखिएका थिए ।
यसकारण धोनीले छोडे एक दिवसीय तथा टी-ट्वान्टी कप्तान
झारखण्ड र गुजरातबिच रणजी ट्रफीको सेमिफाइनल खेल भइरहेको थियो । मेंटरको रुपमा धोनी आफ्नो राज्यको टिमको हौशला बढाइरहेका थिए । यसैबिच उनी राष्ट्रिय चयन समितिको मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद पनि त्यहाँ थिए । धोनी र एमएसके प्रसाद लामो समय कुराकानी गरिरहेका थिए । के तिनीहरु धोनीको करियरको बारेमा त कुरा गरिरहेका थिएनन् ? यसलाई पनि धोनीको सन्यासको अर्को पाटोको रुपमा हेरिएको छ ।
ठाकुरको बिदाई पनि हुनसक्छ एक कारण
यसका अलवा दुईदिन अगाडि भारतीय सुप्रिम कोर्टले बीसीसीआईमाथि लिएको रणनीति पनि एक कारण हुनसक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा बताइएको छ । अदालतले बोर्डको अध्यक्ष अनुराग ठाकुर र सचिव अजय शिर्केलाई बर्खास्त गर्‍यो । धोनी र अनुराग ठाकुरको राम्रो सम्बन्ध थियो यसकारण ठाकुरको बिदाई पश्चात धोनीले किन लिए यस्तो फैसला ? यसलाई लिएर मानिसहरुले अनेक टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ धोनीको अबको योजना
बताइएअनुसार धोनीले कप्तानी छोडेसँगै भविष्यको योजना समेत तयार पारिसकेका छन् । धोनीले जब टेस्टबाट सन्यास लिएका थिए, बिना सोच विचार तुरुन्त भारतीय टेस्ट क्रिकेटको कप्तानी विराट कोहलीलाई सुम्पिइएको थियो । जबकि भारतले विदेशमा एउटा सीरिज खेलिरहेको थियो । अब विराट कोहलीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएर धोनीको मार्गदर्शनमा विराटले कप्तानी सम्हालेपछि धोनीले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिन सक्नेछन् ।
म्याच प्रिभ्युः स्पेनलाई जित्नै पर्ने दबाब, इरान अंक खोस्ने दाउमा
रियल मड्रिडका प्रशिक्षक भक्कानिदै रोएपछि…
लियोनल मेसीबारे केही अजबगजबका कुराहरु
म्याच प्रिभ्युः साउदीमाथि ठुलो दबाब, लाज जोगाउन भने पनि उरुग्वेलाई रोक्नै पर्ने दबाब
म्याच प्रिभ्युः पोर्चुगलमाथि खेल जित्नै पर्ने दबाब, मोरक्को रोनाल्डोलाई रोक्ने दाउमा
आयोजक देश रसियासँग इजिप्ट पनि पराजित
सेनेगलको सानदार खेल प्रदर्शन, पोल्याण्ड पराजित
जापानद्वारा कोलम्बिया २-१ ले पराजित
कोलम्बिया र जापानबीचको खेलः १–१ गोलको बराबरीमा पहिलो हाफ
कोलम्बियाका कार्लसलाई विश्वकपको पहिलो रेड कार्ड, पेनाल्टीमा जापानको गोल
जापानलाई सहजै पराजित गर्ने दाउमा कोलम्बिया
सुगाको भविष्यवाणी : जापानले पहिलो खेल गुमाउनेछ
साउदी अरबको फुटबल टोली सवार विमानमा आगो देखियो, सबै यात्रु सुरक्षित
आईसीसी वानडे र्‍याङकिङमा अष्ट्रेलियालाई ठूलो झट्का
विश्वकपमा हालसम्म भएका १४ खेलको नतिजा यस्तो
म्याच प्रिभ्युः रसियालाई पराजित गर्नै पर्ने दबाबमा इजिप्ट
म्याच प्रिभ्युः साइडो माने भर्सेस रोबर्ट लिडोनोस्की, पोल्याण्डलाई पराजित गर्ने दाउमा सेनेगल
म्याच प्रिभ्युः जापान भर्सेस कोलम्बिया